Raharaha Nadine Ramaroson Hivoaka anio ny marina ?
Fibodoana tany etsy Ambatomainty
Nitsangana nanao sonia fifampivarotana ny maty tany am-pasana ?
Mahagaga sy mahatalanjona, hoy Rafalimanana Nestor solontenan�ny mpandova an�Itompokovavy Rafara Madeleine, ny momba ny tany lovanay etsy Ambatomainty Antananarivo Renivohitra izay tsy namidinay velively mihitsy nefa dia misy olona milaza ho nividy azy ka manorina trano eo amboniny ankehitriny.
Lire la suite...	Air Madagascar
Nampihena 20% ny saran-dalany mankany ivelany
Vanim-potoana fanaovana fihenambidy amin�ny vidina tapakila ny volana mey ho an�ny kaompaniam-pitaterana anabakabaka satria vitsy ny mpandeha makaty Madagasikara.
Lire la suite...	Mananara Avaratra
Lasa fanjakan�ny Baroa
Toy ny tany tsy misy fanjakana ao Mananara Avaratra amin�izao fotoana izao. Manjaka ny fitsaram-bahoaka noho tondromolotra sy ny fankahalana.
Lire la suite...	Orinasa Ambatovy
Hanala mpiasa miisa 650 ?
Mahoraka ao Toamasina fa dia �hanala mpiasa miisa 650� ny orinasa Ambatovy ka teratany vahiny miasa ao ny 150 amin�ireo ary Malagasy kosa ny 500.
Lire la suite...	Fehin-kevitry ny FFKM
Velona ahiahy ny fiombonamben�ny Eveka
Tsy miombon-kevitra amin�ny FFKM momba ireo fihen-kevitra tinapaka teny Ivato ny birao maharitry ny Eveka Katolika araka ny fanambarana efa navoakany.
Lire la suite...	Kolonely Raymond
Nesorina tsy ho zandary intsony ?
Nahoraka ny faran�ny herinandro teo fa hoe : nesorina tsy ho isan�ny fianakaviamben�ny zandary intsony ny lietna-kolonely Andrianjafy Raymond.
15/05/2012 Fantatra izao fa hifampitafa amin�ny mpanao gazety momba ny nahafatesan�i Nadine Ramaroson anio talata manomboka amin�ny telo ora tolakandro eny amin�ny Orchid�e Blanche Androhibe, ny fianakaviana Ramaroson.
Ity fianakaviana ity moa dia efa nilaza sy namerimberina fa mampiahiahy ihany ny antony marina nampivadika ilay sambo Black Shark sy ny nahafaty ny zanak’izy ireo. Ny CST Alain Ramaroson, dadatoan’ny maty manokana, dia mbola nanamafy izay efa nolazainy ombieny ombieny tamin’ny sabotsy teo teny Ambatonakanga fa efa vita ny fanadihadina natao ka voaporofo fa nisy namono ny zanany ary misy ny ahiahiany ny amin’izany fa miandry fotoana kely kosa izy hanambarany azy. Be ny siosion-dresaka manodidina iny raharaha iny, ka handrenesana feo etsy sy eroa milaza fa hafahafa tokoa ny zava-nitranga rehetra.
Nahoana no tsy maintsy nandeha sambo itompokovavy ? Nahoana no tara be vao nanainga ? Inona no antony namonoana ny moteran’ny sambo teo am-pidirana ny vinany tao Soanierena Ivongo ? Inona no nahatonga ireo fipoahana ? Ary tamin’ny faran’ny herinandro teo aza dia nisy ny zavatra nivoaka tamin’ny tranonkala, afaka nahita izany ireo miserasera amin’ny facebook. Milaza mazava io karazana famoahana tsiambaratelo tamin’ny tranonkala io fa nisy ny paika sy tetika hamonoana an’i Nadine Ramaroson ka anarana maro no nivoaka tao, ary voatantara amin’ny antsipirihany mihitsy ny dingana rehetra natao tamin’izany, niainga teto Antananarivo, Toamasina, Fenoarivo Atsinanana, Sainte Marie ary Soanierana Ivongo. Tsy voatery ho marina sy mitombina avokoa ny zavatra rehetra hita amin’ny "internet" saingy ny manaitra amin’ity famoahana ity dia tena amin’ny antsipirihany amin’ny daty sy ora ary minitra mihitsy ny zavatra ambara rehetra.
Tsy hay ihany koa na fifandrifian-javatra na ahoana fa andro vitsivitsy taorian’ny niparitahan’io vaovao io tamin’ny facebook, dia izao hihaona amin’ny mpanao gazety, eny Androhibe izao amin’ity anio ity ny fianakaviana Ramaroson. Dia miandry izany ny rehetra satria tena azo ambara fa goavana ity raharaha ity. Na manamafy ny fianakaviana Ramaroson fa tena novonoina ny minisitry ny mponina teo aloha noho ny antony maro samihafa, ary mety hivoaka ny tsiambaratelo maromaro na izy ireo milaza fa loza tahaka ny loza mitranga rehetra ihany no nampivadika ilay sambo Black Shark 500 metatra tsy hahatongavany tao Soanierana Ivongo.